Mpanao Gazety Tratran’ny Fanerena & Krizy Nokleary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2017 7:24 GMT
(Lahatsoratra nivoaka efa tamin'ny volana Aprily 2006)
Nilaza i Saminejad’, mpisolovava sady bilaogera voafonja fa nolavin'ny fitsarana ny fampiakaran'izy ireo ny raharaha any amin'ny fitsarana ambony ary tokony higadra mandritra ny folo volana izy. Namoaka izany vaovao izany ny ISNA, Sampan-draharaham-pirenen'ny Mpianatra Iraniana.
Ny lohahevitra mafana amin'ny bilaogy dia i Seymour Hersh, mpanao gazety mpanao famotorana, lahatsoratra sy fanadihadiana fa mety hidaroka baomba an'i Iran amin'ny fitaovam-piadiana nokleary i Etazonia mba hanakanana ny tetikasa nokleary ao Iran.
Behi, bilaogera monina ao Iran, nanoratra ny fahatsapany sy ny eritreriny mikasika ity tantara ity. Hoy izy:
“Manomboka mino aho fa miaina amin'ny fotoana mikorontana eo amin'ny tantaran'ny olombelona isika! Tsy mbola (mino) ny zavatra reko momba ireo fifanakalozan-kevitra amin'ny hampiasana fitaovam-piadiana nokleary ao amin'ireo toerana nokleary any Iran! Hey, maheno ahy ve ianareo? Olona ety an-tany isika! Azonao ve izany?
Fantatro fotsiny fa rehefa milaza zavatra i Etazonia ary miantso izany ho hadalana ny vondrona Eoropeana ary avy eo milaza i UK fa tsy azo inoana izany, dia hitranga izany!
Izany no fomba tsara hitarihana ny vahoaka, milaza ianao amin'ny voalohany hoe “hampiasa fitaovam-piadiana nokleary aho na hoe fanombatombanana izany”, dia manomboka manakiana ilay hevitra ny rehetra, ary afaka aty aoriana kely, miteny ianao hoe “OK, OK hampiasa ny baomba tsotra fotsiny aho” ary hihomehy be ny olon-drehetra!
Abtahi, mpanao politika reformista & bilaogera, miresaka momba ireo fandrahonana vao haingana mihatra amin'ny mpanao gazety. Araka ny voalazan'i Abtahi, nilaza i Shargh, mpanao gazety reformista sady tonian-dahatsoratra fa rehefa avy mahavita asa amin'ny alina, tsy misy olona mandeha irery. Notafihana tamin'ny cocktail Molotov ny EtemadeMeli izay tantanin'ny Atoa.Karoubi, mpitondra fivavahana reformista. Nilaza i Abtahi fa tsy afaka manao na inona na inona isika saingy farafaharatsiny, tsy maintsy manoratra mikasika ireo tranga ireo.
Tajzadeh (Persiana) mihevitra fa vonona amin'ny fanafihana an'i Iran ny hevi-bahoaka Amerikana. Milaza izy fa ny tatitra vao haingana navoakan'ny Fox News dia mampiseho fa mihevitra ny 85 isanjato fa manana tanjona ara-miaramila ny tetikasa nokleary Iraniana. Nampiany koa fa ny 16 isanjato dia mihevitra fa loza mitatao ho an'i Etazonia i Iran ary ny 40 isanjato mihevitra fa loza amin'ny hoavy akaiky i Iran.
Tajzadeh indray milaza fa nampiray ireo firenena lehibe rehetra manohitra ny fandaharan'asa nokleary Iraniana ny fampielezan-kevitry ny governemanta Iraniana momba ny tanjaky ny balafomanga Iraniana sy ny fanambarana fa tsy maintsy ho voafafa amin'ny sarintany i Israely. Ankehitriny, ao amin'ny biraon'ny Filan-kevi-piarovan'ny Firenena Mitambatra ny raharaha Iraniana .